आज महानायक राजेश हमालको जन्मदिन, कति वर्ष पुगे त? हे’र्नुहोस्
Homeसमाचारआज महानायक राजेश हमालको जन्मदिन, कति वर्ष पुगे त? हे’र्नुहोस्
June 8, 2021 admin समाचार 3167
काठमाडौं-आज महा’नायक अभिनेता राजेश हमालको आज जन्मदिन परेको छ । ५४ बर्षमा प्रवेश गरेका छन् । परिवा’रको कान्छो सन्तानको रुपमा हमालले १९६४ जुन ९ मा माता रेणु हमालको को’खबाट जन्म लिएका हुन् ।जन्म’दिनको दिन उनलाई शुभकामना दिनेको ओइरो लागेको छ । २०४८ सालको ‘युगदेखि युगसम्म’बाट अभि’नयमा पाइला चालेका उनी नेपाली सिने ज’गतको दरिलो खम्बा हुन् ।
४ वर्ष अगाडी ५० वर्षको उमेरमा मधु भट्ट’राईसँग विवाह गरेका राजेशले ‘सकुन्तला’ सिनेमामा अभिनय गरेपछि अर्को फिल्ममा देखा परेका छैनन् । यद्यपी म्युजिक भिडि’योमा भने उनले अभि’नय गरेका छन् ।
कुनै समय ह’मालको टाउको मात्र पोस्टरमा राखिदिए हलमा दर्शकको लाम लाग्ने गर्थ्यो । सिनेमा क्षेत्रमा तीन दशक अभि’नय गरेका हमालको जोडी कृष्टि मैनाली, क’रिश्मा मानन्धर, निरुता सिंह हुँदै रेखा थापासँग समेत जम्यो । लामो’समय पछी ठुलो पर्दामा कमब्याक गर्ने तयारी गरेका उनी चाँडैनै प्रोडक्स’नबाट आउने तर्खर रहेको केही समय अघि बताएका थिए ।
यो पनि, का’ठमाडौं । बलिउड सुन्दरी नायिका शिल्पा शेट्टी आज’बाट ४६ वर्षमा लागेकी छिन् । ८ जुन, १९७५ मा मंगलौरमा जन्मिएकी यि सुन्दरलाई बिहा’नैदेखि आफन्त, शुभचिन्तक तथा फ्यानहरुले शुभकामनाको वर्षा गराइर’हेका छन् ।
उनलाई शुभका’मना दिनेहरुले जुनी जुनीसम्म यस्तै सुन्दर र स्वस्थ रहेको देख्न पाउँ भन्ने काम’ना गरेका छन् । ८ जुन, १९७५ मा मंगलौरमा जन्मि’एकी यि सुन्दरीले आफ्नो पढाई मुम्बईबाट पूरा गरेकी हुन् । अभिनयसँगै आफ्नो उत्कृ’ष्ट नृत्यका लागि चर्चित शिल्पा कराँतेकी ब्ल्याक बेल्ट पनि हुन् ।
शाह’रुख खानको फिल्म बाजिगर’मार्फत उनले बलिउड डेब्यु गरेकी शिल्पा ४६ वर्षमा पनि २० वर्षकी देखिनुको राज हो उनको फिटनेस । फिल्ममा आउनु’अघि शिल्पा मोडलिङ जमेकी यि सुन्दरी अहिले योगा सिक्ने र सिका’उने काममा पनि उत्तिकै ब्यस्त छिन् । ओएस नेपालबाट
लकडाउनपछि, यस्तो छ कट्रीनाको योजना
May 4, 2021 admin समाचार 4032
December 11, 2020 admin समाचार 6618
नायिका श्वेता खड्का परि’वारका सबै सद’स्यहरु सहित पहिलो पटक मिडिया देखा परेकी छिन् । एक युट्युवसँगको कुरा’कानीका क्रममा श्वेतालाई उनकी सासुले श्वेतालाई बुहा’रीको रुपमा नभई छोरीको रुपमा स्विकारेको बता’एकी छिन् । श्वेताकीसासुले श्वेता आफ्नो कान्छो
पारस शाहकी छोरी पूर्णिका जिब्रो ल’र्बराउदै आइन् लाइभमा , पूर्व राजा बारे यसो भनिन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
June 9, 2021 admin समाचार 3696
पूर्वयुव’राज पारस शाहकी छोरी पूर्णिका शाहले टिकटकमा एउटा भिडियो राखेकी छिन् । जसमा उनले आफ्नो परि’वारको बारेमा बोलेकी छिन् ।पूर्णिका शाहले आफ्ना पिता पारस शाहले देशको लागि ठूलो योगदान गरेको बता:एकी छिन् । उनले भनेकी